ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းက… အမျိုးသမီးတွေကို …မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေ – ရွှေအလင်း
ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းက… အမျိုးသမီးတွေကို …မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေ
KBS ရုပ်သံလှိုင်းရဲ့ Discoveries in Lifeဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
အဒါကတော ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြည့်ခြင်းက ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကိုတော့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကို ၁မိနစ်အတွင်းမှာ လူနဲ့နာမည်တွေ မှတ်နိုင်သလောက် မှတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်လေးချောချောလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေ ၄ခုထက်ပိုတဲ့ အဖြေမှန်တွေကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းကို လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ချောတဲ့ အမျိုးသားဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှော်က်လှိုင်းတွေက ပုံမှန်အချိန်ထက် သိသိသာသာ တက်ကြွနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော လေ့လာတဲ့ ဌာနခေါင်းဆောင်ကလည်း ဒီအကြောင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုအရတော့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ ပုံကို ကြည့်ခြင်းက ဦးနှောက်အပေါ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတွေက ရုပ်ရည်လှပတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူတိုရဲ့ မှတ်ဥာဏ်က ဘာတိုးတက်မှုမှမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသားတွေက အာရုံထွေပြားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
KBS ရုပျသံလှိုငျးရဲ့ Discoveries in Lifeဆိုတဲ့ အစီအစဉျကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုတဈခုကို ထုတျဖျေါတငျဆကျခဲ့ပါတယျ။
အဒါကတော ရုပျရညျခြောမောတဲ့ အမြိုးသားတှကေို ကွညျ့ခွငျးက ကြောငျးမှာ အမှတျကောငျးကောငျးရစနေိုငျတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလလေ့ာမှုကိုတော့ သကျလတျပိုငျး အမြိုးသမီးတှနေဲ့ စမျးသပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအမြိုးသမီးတှကေို ၁မိနဈအတှငျးမှာ လူနဲ့နာမညျတှေ မှတျနိုငျသလောကျ မှတျခိုငျးခဲ့ပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ကောငျလေးခြောခြောလေးတှရေဲ့ ဓါတျပုံကို ကွညျ့ခိုငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မှတျဉာဏျပွနျလညျစဈဆေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တှေ ၄ခုထကျပိုတဲ့ အဖွမှေနျတှကေို ဖွပေေးနိုငျပါတယျ။ ဒီလလေ့ာမှုကတော့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဦးနှောကျလှိုငျးကို လလေ့ာခဲ့တာဖွဈပွီး ရုပျခြောတဲ့ အမြိုးသားဓါတျပုံတှကေို ကွညျ့နတေဲ့အခြိနျမှာ ဦးနှျောကျလှိုငျးတှကေ ပုံမှနျအခြိနျထကျ သိသိသာသာ တကျကွှနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွော လလေ့ာတဲ့ ဌာနခေါငျးဆောငျကလညျး ဒီအကွောငျးကို အတညျပွုပေးခဲ့ပါတယျ။
နောကျထပျ ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျတဈယောကျရဲ့ အဆိုအရတော့ ရုပျရညျခြောမောတဲ့အမြိုးသားတှရေဲ့ ပုံကို ကွညျ့ခွငျးက ဦးနှောကျအပျေါမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုတှရှေိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြိုးသားတှကေ ရုပျရညျလှပတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ သူတိုရဲ့ မှတျဉာဏျက ဘာတိုးတကျမှုမှမရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အမြိုးသားတှကေ အာရုံထှပွေားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
တောင်သမန်ဘိုးဘိုးကြီးနတ်ပွဲမှာ ရန်ဖြစ်လို့ နတ်ဝင်သည်တွေ အပါအ၀င် ၇ ယောက် ဆေးရုံတင်ထားရ :o :o Wow :o
“ထီပေါက်လို့ ပျော်နေတဲ့ ဘေဘီမောင်”
ထီဖိုး အကြွေးလာတောင်းမှ.. ထီပေါက်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့..(၃) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်.. :O
“မြမြ” ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် အဓိက မင်းသားကို တရားဝင်ကြော်ငြာလိုက်ပြီ
Winner နဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကို အံ့ဖွယ်ပို့ဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Myanmar Got Talent ပြိုင်ပွဲဝင် Angelo ရဲ့ Video
အိမ်အကူကိုအက်စက်နဲ့ပက်ခဲ့သည့်အိမ်ရှင် ၂ ဦးအား မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးစွာချမှတ်
အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖော်မလင် ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု မိသားစုဘက်က မေးခွန်းတွေက ဘာလဲ DNA တကယ်ပျက်ခဲ့တာလား?
သွားကိုက်ခြင်းကို ၁ မိနစ် အတွင်း သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
ကြည့်ရှုသူအလွန်များပြားနေတဲ့ စင်ကာပူ မရီနာဘေးတွင် မိုးပျံပြသွားသည့် ရုပ်သံဖိုင်😱
“ည ၃ နာရီအချိန်ကြီးဘုံဆွမ်းလောင်းတိုးနေရတဲ့ ကိုရင်လေး”
“မြမြ” ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် အဓိက မင်းသားကို...
Winner နဲ့လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကို အံ့ဖွယ်ပို့ဆောင်ပြခဲ့တဲ့...
အိမ်အကူကိုအက်စက်နဲ့ပက်ခဲ့သည့်အိမ်ရှင် ၂ ဦးအား မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှ...